vivo Y12s丨vivo Myanmar
Y12s တွင် ၆.၅၁ လက်မ Halo FullView ™ Display နှင့် HD+ အရည်အသွေးရှိ (1600 × 720) resolution တို့ပါဝင်သည်။ ဗီဒီယိုများနှင့် ဂိမ်းများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မြင်ကွင်းနဲ့ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမျက်နှာပြင်သည် မျက်စိကို အန္တရာယ်ရှိသောအပြာရောင်မီးများကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်
2.5D ဖိတ်ဖိတ်တောက် အရောင်လေးများ
Glacier အပြာရောင်သည် မှော်ဆန်သော ရေခဲမြစ်တစ်ခုကဲ့သို့ အပြာဖျော့ရောင် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖြာကျနေသော သက်တံ့ရောင်များကို အသုံးပြုဖော်ကြူးထားသည်။ ဒါဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွမှုအငွေ့အသက်တစ်ခုဖြစ်သလို ရိုမန်တစ်လည်း ဆန်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
vivo ၏ Side-Mounted Fingerprint ဒီဇိုင်းသည် ပါဝါအဖွင့်ခလုတ်နှင့် လက်ဗွေစနစ်ကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်ဒီဇိုင်းသည် Y12s ကို ပိုမိုစတိုင်ကျလှပပြီး သပ်ရပ်သားနားစေတဲ့အပြင် ထပ်မံအားစိုက်ထုတ်စရာမလိုအောင် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကို ကောင်းမွန်စေသည်။ တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင်ကနေ ဖွင့်ဖို့ကြာချိန်က ဝ.၂၃ စက္ကန့်ပဲ ကြာလို့ မြင်လိုက်ရဖို့တောင် အရမ်းမြန်ချက်ပါပဲ။
စွမ်းအားပြည့် 5000 mAh ဘက်ထရီ
Y12s တွင် 5000mAh (TYP) ဘက်ထရီပါရှိပြီး AI စွမ်းအင်ချွေတာသောနည်းပညာဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးထားလို့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ အားအမြဲပြည့်နေစေမှာပါ။ တစ်ကြိမ် အားအပြည့်သွင်းထားပါက ၁၆.၃ နာရီ အွန်လိုင်း HD ရုပ်ရှင်လွှင့်ခြင်း (သို့) ၈.၉ နာရီ စွမ်းအင်သုံးများသော ဂိမ်းများကို ကစားနိုင်သည်။ ၎င်းကို 5V / 1A Reverse Charging ဖြင့်လည်းအင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားခြင်းကြောင့် သင်၏ Y12s များကို ပါဝါဘဏ် ကဲ့သို့ အခြားကိရိယာများကို အားသွင်းရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
AI Dual Camera ကို Face Beauty နှင့် Filters များအပါအဝင် နေ့စဉ်ရိုက်ကူးရေးတွေအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ 13MP အနောက်ဘက်ကင်မရာနှင့်f/ 2.2 ကြီးမားသော aperture တို့ဖြင့် အသေးစိတ်ကျမှုတွေအားလုံးဟာ တောက်ပနေမှာ အမှန်ပါ။
2MP Bokeh ကင်မရာသည် တိကျမှန်ကန်ပြီး ရှုပ်ထွေးသောရလဒ်များကို ရရှိစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော bokeh algorithm ကို ကျေးဇူးတင်ရုံသာ။ အခုတော့ portrait ပုံတွေဟာ ပိုပြီးရှင်သန်နေသလိုပဲ သူတို့တွေဟာ ပိုမိုတိကျနက်နဲလာပါတယ်။
vivo ၏ Face Wake က သင်၏ဖုန်းကို သင်၏မျက်နှာကိုမှတ်မိသည် နှင့်တပြိုင်နက်တည်း ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ Side Fingerprint နှင့်တွဲဖက်ပါက သင်၏ဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဘယ်သောအခါမျှမရှိခဲ့တဲ့ အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီး စမတ်ကျမှုတွေကို တွေ့ကြုံရစေမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထူးကဲသော Multi-Turbo 3.0 သည် ဂိမ်းတွင်ထစ်ငေါ့ခြင်းနှင့် နောက်ကျခြင်းတို့ကို လျှော့ချရန်အဓိကမြင်ကွင်းများကို အကောင်းဆုံးအာရုံစိုက်နိုင်စေသည်။ ၎င်းသည် CPU နှင့် internal သိုလှောင်မှုအရင်းအမြစ်များကို အထူးသဖြင့် နောက်ခံတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်း လည်ပတ်နေသည့်အချိန်တွင်လည်း ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သည်။
အမှတ်တရများက သင်၏ဓါတ်ပုံများကို အချိန်၊ နေရာဒေသနဲ့ အခိုက်အတန့်များဆိုပြီး အုပ်စုဖွဲ့ပေးထားမှာပါ။ သင်၏ဓါတ်ပုံများသည် တီထွင်ဆန်းသစ်စွာ မည်သို့မည်ပုံ ကိုက်ညီကြောင်းရှာဖွေပါ။ အခိုက်အတန့်တွေ၊ အမှတ်တရတွေ ပိုမို ဖန်တီးရင်းနဲ့ပေါ့။
အသေးစိတ် အာရုံစိုက်သော iManager သည် vivo အသုံးပြုသူများကို ပျင်းစရာကောင်းသော နေ့စဉ်အလုပ်များမှ လွတ်မြောက်စေသည်။ သင်၏ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြဿနာများကို စစ်ဆေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ညအချိန်မှာ ဂရုစိုက်ရန် ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ညအိပ်အနားယူချိန်၌ iManager သည် သင်၏ဖုန်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံစံအတိုင်းဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးထားမည်ဖြစ်သည်။
1. Screen size မှာ ထောင့်ဖြတ် တိုင်းတာထားခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ထောင့်မှန်အပြည့်မှာ ၆.၅၁ လက်မဖြစ်ပြီး ထောင့်ချိုးအကွေးများ ထည့်သွင်းတိုင်းတာပါက အနည်းငယ် သေးငယ်သည်။
3. ယခု ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်အားလုံးသည် ဒီဇိုင်းပညာရှင် တိုင်းတာသူများ၊ သုသေသန စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် ရလဒ်များနှင့် supplier များ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည်သည် software version၊ specific test environment နှင့် phone model များအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲလွဲသွားနိုင်ပါသည်။
4. ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ အပြောင်းအလဲ (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့် သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်း၏အစိတ်အပိုင်းများ ကွဲပြားနိုင်သကဲ့သို့ vivo သည်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤစာမျက်နှာရှိ ဖော်ပြချက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာကို အသုံးမပြုခင်သေချာဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။
5. pixel တန်ဖိုးသည် မတူညီသောကင်မရာ အသုံးအနှုန်းများအောက်တွင် ကွဲပြားနိုင်ပြီးအမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်သည်။
6. အပြာရောင်အလင်းစစ်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် Eye Protection မျက်လုံးကာကွယ်မှုစနစ်ကို ဖွင့်ထားရမည်။
7. မှတ်ချက် - ပြည်တွင်းဈေးကွက် လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အရောင်များကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
8. ဝ.၂၃ စက္ကန့်သည် ဘေးဘက်လက်ဗွေစနစ်ဖြင့် ဖွင့်ရသည့် ကြာချိန်ဖြစ်ပြီး vivo labs မှ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ဖွင့်ချိန်သည် ဝ.၂၃ စက္ကန့် ဖြစ်ကာ မျက်နှာပြင်ပိတ်ချိန်သည် ဝ.၃၂ စက္ကန့် ကြာမြင့်သည်။ အမှန်တကယ် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမှန်တကယ် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
9. အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားချိန် - 4G ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု၊ 150cd / m² ဖန်သားမျက်နှာပြင် တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအတိုးအကျယ်ရှိသော Y12s များသည် PUBG ကို ပုံမှန်ချိန်ညှိချက်များဖြင့် ကစားနိုင်ပြီး ၈.၉ နာရီအထိ ဆက်တိုက်ကစားနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ဂိမ်းအချိန်သည် တချို့သော အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
10. အွန်လိုင်းဗီဒီယိုလွှင့်ချိန်အချိန် - စွမ်းအားပြည့်ပြီး 4G ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု၊ 150cd / m²ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအတိုးအကျယ်ရှိခြင်းဖြင့် Y12s သည် YouTube ၌ဗီဒီယိုများကို ၁၆.၃ နာရီအထိအဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်သောအချိန်သည်သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
11. ပုံမှန်ဘက်ထရီပမာဏမှာ 5000mAh ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီမှာ ၄၉၁၀ mAh ဖြစ်သည်။
12. Reverse charging အား အသုံးပြုနိုင်ရန် OTG cable ကို သီးခြား ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
13. OTG လုပ်ဆောင်ချက်ကို Setting ထဲတွင် အသုံးမပြုမီ သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
14. စင်တာ Turbo နှင့် AI Turbo တို့ကို မော်ဒယ်အားလုံးတွင် ရရှိနိုင်သည်။